umthetho wabucala
1. Ukusetyenziswa koMxholo weSiza
Iwebhusayithi inelungelo lokutolika imixholo yale ndawo kunye nemixholo yale ndawo kuphela ekusebenziseni kwakho. Umxholo oqulathwe kwilungelo lokushicilela nakwezinye izaziso zobunini, kuya kufuneka uhlonitshwe kwaye ikopi iya kugcinwa. Isiteyitimenti esichanekileyo, asithethi ukuba le sayithi ayinamalungelo, ayithethi ukuba loo sayithi ayibangi malungelo, kwaye kuya kufuneka uhloniphe umthetho-siseko wokuthembeka kunye nomdla osemthethweni womxholo ukuze usetyenziswe ngokusemthethweni. uguqule, ukope, ubonise esidlangalaleni, upapashe okanye usasaze ezo zinto okanye uzisebenzisele nayiphi na injongo yoluntu okanye yorhwebo Thintela naziphi na ezi zinto nakweyiphi na enye iwebhusayithi okanye enye imithombo yeendaba eprintayo okanye indawo yekhompyuter yenethiwekhi. ukukhuselwa ngokusemthethweni ngumthetho welungelo lokushicilela, nakuphi na ukusetyenziswa okungagunyaziswanga kunokuba yinto enelungelo lokushicilela, uphawu lwentengiso kunye namanye amalungelo asemthethweni Ukuba awuwamkeli okanye wophule le Migaqo, isigunyaziso sakho sokusebenzisa indawo siza zipheliswe ngokuzenzekelayo kwaye kufuneka uzitshabalalise ngoko nangoko naziphi na izinto ezikhutshelweyo okanye eziprintiweyo.
2. Indawo yokusasaza ulwazi
Ukufumaneka komxholo kule ndawo ngaphandle kwayo nayiphi na indlela yesiqinisekiso.Akuqinisekisi ngokuchanekileyo nangokugqibeleleyo.Iindawo kwiimveliso, ubuchwephesha, iinkqubo, amaxabiso kunye nolwabiwo ziya kuxhomekeka kutshintsho ngaphandle kwesaziso.Iziqulatho zesiza zinokuphelelwa lixesha, Chipsmall Akukho ukuzibophelela ekuyihlaziyweni. Ukukhutshwa kolwazi olunokuthi lube kwindawo yakho okwangoku akunakufumana imveliso, inkqubo okanye inkonzo, unokufaka isicelo koqhakamshelwano lweShishini lweChipsmall kunye nomhambisi.
Ukongeza kumalungiselelo abucala, ngaphandle kwalawo, uthumela okanye uthumele naziphi na izinto kule ndawo, okanye ulwazi loqhakamshelwano (apha ekuza kubhekiswa kulo njengolwazi) luya kuthathwa njengolungeyomfihlo nolungenabunikazi. ukophula imithetho, imigaqo kunye nokuziphatha kukawonke-wonke, ungathumeli okanye uthumele ngeposi okanye uthumele nayiphi na into engekho mthethweni, eyoyikisayo, engcolileyo, engcolisayo, engamanyala, iphonografi okanye ezinye izinto ezingekho mthethweni. zive ukhululekile ukucima umyalezo okanye ukunqunyanyiswa okungenamda kolwazi kwisikhangeli seWebhu, ngaphandle kokufumana imvume kwangaphambili, akukho sinyanzelo sokuthumela isaziso, imeko inzima, le ndawo inokususwa kumsebenzisi.
4.Users exchange umxholo
I-Chipsmall iphila ngokubeka iliso okanye ukuphonononga umsebenzisi ukuba athumele okanye athumele imiyalezo okanye anxibelelane kuphela nabanye ngolwazi kuyo nayiphi na inkalo yoxanduva, kubandakanya kodwa kungaphelelanga kumagumbi okuxoxa, iiforamu zeChipsmall okanye ezinye iiforamu zabasebenzisi, kunye nolunye utshintsho lomxholo. Umxholo walo naluphi na utshintshiselwano aluthathi xanduva, nokuba lubangela ukungcola, ubumfihlo, amanyala, okanye ezinye iingxaki.11 Ukugcinwa xa kufunyenwe ukucinywa kuthathwa njengokuhlukumeza, ukuhlambalaza, ukungcola okanye enye into engafanelekanga kumxholo wolwazi. .
5.Site ukukhuphela isoftware oyisebenzisayo
Ukuba ukhuphela isoftware ekusebenziseni isoftware ukuthobela isivumelwano selayisensi yesoftware ukuzisa yonke imigaqo yelayisensi yesoftware Xa ufunda kwaye usamkela isivumelwano sephepha-mvume lesoftware ngaphambi kokuba amalungiselelo angakhupheli okanye afake isoftware.
6. Ukunxibelelana neewebhusayithi zomntu wesithathu
Amakhonkco esiza kwiiwebhusayithi zomntu wesithathu kuphela njengokulula kuwe.Ukuba usebenzisa la makhonkco, uya kuyishiya loo ndawo .1Akuphononongi naziphi na iisayithi zomntu wesithathu, ezi ndawo kunye nemixholo yazo azilawuli, ngaphandle koxanduva.Ukuba uthatha isigqibo. ukufikelela kuwo nawaphi na amakhonkco kwiindawo zomntu wesithathu, iziphumo ezinokubakho kunye nemingcipheko elawulwa nguwe.
7.Ukusikelwa umda koxanduva
I-Chipsmall kunye nabanikezeli bayo okanye umntu wesithathu okhankanyiweyo akanaxanduva lomonakalo (kubandakanya kodwa kungaphelelwanga kwinzuzo elahlekileyo, idatha elahlekileyo okanye ukuphazamiseka kweshishini okubangelwe ngumonakalo), nokuba loo monakalo usetyenziswa ngokufanelekileyo, okanye awunakho ukusebenzisa iWebhusayithi, kunye Amakhonkco esiza nakweyiphi na iwebhusayithi okanye naluphi na ulwazi oluqulathwe kwezo ndawo zibangelwe, kwaye nokuba banesivumelwano, itort okanye nasiphi na isiseko esisemthethweni kwangaphambili kwaye oku kube ngumonakalo onjalo kunokubakho ingcebiso. Ukuba usebenzisa le ndawo njengesiphumo ulwazi okanye idatha eyimfuneko kulondolozo lwezixhobo, ukulungiswa okanye ukulungiswa, kuya kufuneka wazi ukuba yeyabo kufuneka ithwale zonke iindleko ezivela kuyo.11 Kwimeko yezi meko zilandelayo ngaphandle koxanduva: ukuhanjiswa kolwazi ngumboneleli ngenkonzo yenethiwekhi (Chipsmall. Kwaye umntu ogunyazisiweyo) ngaphandle kokuqaliswa; ukuhanjiswa kolwazi, ukuhanjiswa, uqhagamshelo kunye nokugcinwa kubonelelwa yinkqubo efanelekileyo yobuchwephesha, ukhetho lwenkonzo yenethiwekhi Ukongeza kwezinye iimfuno zempendulo ezenzekelayo, umboneleli wesevisi yenethiwekhi akabakhethi aba banikezeli bolwazi kunye nabamkeli; Inkqubo yabanikezeli beenkonzo zenethiwekhi okanye umlamli ophakathi okanye ukugcinwa okwethutyana kolwazi lwefom, phantsi kweemeko eziqhelekileyo, hayi umntu ongenguye Umamkeli ekujongwe ukuba afumane ixesha eligciniweyo alikho ixesha elingaphezulu komamkeli onikezelweyo lokubonelela ukufikelela kulwazi lokuhambisa, ukuhambisa okanye ngokudibanisa ixesha elifanelekileyo; ngenkqubo okanye ukuhanjiswa kwenethiwekhi komxholo wolwazi uhambile.
8. Imigaqo ngokubanzi
I-Chipsmall inokuwatshintsha la magama nanini na. Kuya kufuneka utyelele eli phepha ukuze uqonde imigaqo yangoku, kuba le migaqo inxulumene ngokusondeleyo kuwe.Izibonelelo ezithile zale migaqo zinokubakho kwamanye amaphepha ngezaziso zomthetho ezichaziweyo okanye imigaqo etshintshiweyo.